တက်တူးအသစ်ကို ကြွားလိုက်ပြန်တဲ့ Justin Bieber
On April 5, 2018 April 9, 2018 By fairy
Bieber တစ်ယောက် နာရီပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ထိုးထားရတဲ့ သူ့ရဲ့ တက်တူးကို ကြွားလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။ Belieber တွေကြွေကြစမ်းကွား……
“တကယ်လို့ တက်တူးထိုးတာ ဘယ်သူ့ကိုမှမထိခိုက်ဘူး ဆိုရင် မထိုးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။” လို့ပြောထားပြီး ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကင်းဗတ်စတစ်ခုလိုသဘောထားပြီး ချယ်မှုန်းရတာအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီး သုံးရက်ကျော်အချိန်ပေးထားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ဝမ်းဗိုက်က တက်တူးအသစ်တွေကို show off လုပ်ထားတာနော်။ အောက်ကပုံကို တချက်ရှိုး ?
အခုထပ်ထိုးလိုက်တဲ့တက်တူးတွေကိုထည့်တွက်မယ်ဆိုရင် Justin Bieber ကိုယ်ပေါ်မှာတက်တူးပေါင်း ၆၀ကျော်ရှိသွားပါပြီ။ အရင်ကရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ Selena ရဲ့ ပုံကို လက်ကောက်ဝတ်မှာထိုးထားခဲ့ဖူးပေမယ့် အခုတော့ တခြားပုံနဲ့ပြန်ဖုံးလိုက်ပါပြီတဲ့ ? (မှတ်ထားကြနော် ကြိုက်လှချည်ရဲ့ဆိုပြီး ရည်းစားပုံကိုတက်တူးထိုးဖို့ကြံနေတဲ့သူတွေ?)
Bieber ရဲ့ရင်ဘတ်က ထင်းကနဲမြင်နေရတဲ့ တက်တူးတွေကတော့ ခြင်္သေ့၊ လင်းယုန်၊ လက်ဝါးကားတိုင်၊ ကောင်းကင်တမန်အတောင်ပံ၊ ရောမဂဏာန်း(Bieber ရဲ့မိခင်မွေးနှစ်ပါ)၊ “Son of God” နဲ့ “Purpose” ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
ကဲ တက်တူးအသစ်တွေနဲ့ ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ Bieber တစ်ယောက် အရင်လို မဟုတ်တော့ပဲ လိမ္မာနေပြီဆိုတာ တကယ်ဟုတ်မဟုတ် စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်……..
PREVIOUS POST Previous post: မူရင်းအဆိုတော်တွေထက်တောင် အဆိုကောင်းကြတဲ့ Walk off the Earth
NEXT POST Next post: လဲကျရာက ပြန်ထခဲ့သူများထဲက Heavy Metal Godfather – Tony Iommi